Qalabka Daawashada tooska ah ee IPTV ee Iibka
Qeybtaan waxaa ku jira daraasiin taxane ah oo FBE ah, taxane Fu, taxane FUTV, iyo taxane RDS taxane ah oo toos ah fiidiyoowga IPTV encoder / decoder / transcoder, kaas oo taageera SDI iyo HDMI isdhexgalka maqalka maqalka, RTSP RTP RTP UDP HTTP TS RTMP HLS m3u8 IP protocol. Waxay leeyihiin hawlaha taageerada Teletext / subtitle / multilingual * cusboonaysiinta software awood leh iyo dib u soo celinta faylka warbaahinta * xallinta wax soo saarka fiidiyowga 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p, isdhexgalka sare, waxqabadka sare iyo kharash yar, kuwaas oo ku habboon. nidaamka baahinta warbaahinta streaming. Mashiinka waxaa lagu habeyn karaa LCD iyo NMS (software maaraynta shabakada). Waxay la jaan qaadayaan inta badan aaladaha qulqulka, Baahinta Tooska ah ee Adeeg kasta oo Streaming ah sida WOWZA, FMS, Red5, YouTube Live, Buugga Face live, Ustream, Live stream, Twitch, Meridix, Stream spot, Dacast, Tikilive, Netrmedia... Iyada oo la mid ah isdhexgalka sare iyo naqshadeynta kharash-ku-ool ah ayaa ka dhigaya aaladahaan si ballaaran loogu isticmaalo nidaamyada qaybinta dhijitaalka ah ee kala duwan, sida dhismaha heerka baahinta xirfadeed ee IPTV & nidaamka OTT, soo dhaweynta IPTV codsiga, Remote HD shir fiidiyow daaqado badan, fog HD waxbarasho iyo Daawaynta daawaynta HD ee fog, baahinta tooska ah, iwm.
FMUSER Buuxi IPTV Xalka Dugsiga oo leh FBE400 IPTV Server
Qiimaha(USD): na waydii
FMUSER FBE300 Magicoder IPTV H.264/H.265 Hardware Video Transcoder ee Socodka Tooska ah
Qiimaha (USD): 384
Codeeye ahaan, FBE300 waxay ku dhejin kartaa faylalka fiidyaha ee durdurrada fiidiyowga IP waxayna ku riixi kartaa shabakadda si loogu isticmaalo calaamadaha dhijitaalka ah ee dadweynaha.
Decoder ahaan, FBE300 waxay go'aamin kartaa qulqulka fiidiyowga IP-ga ee fiidiyowga HD si loo soo bandhigo iyo dib-u-ciyaarista fiidiyowga khadka tooska ah sidoo kale waxay noqon kartaa sanduuq-sare oo loogu talagalay isticmaalka TV-ga.
Sida transcoder-ka, FBE300 waxay u rogi kartaa qulqulka fiidiyowga IP-ga qaabab kale / borotokool / xalal iyo dib-u-qulqulaya qulqulka fiidiyowga IP-ga ee loo beddelay shabakadda. Si ballaaran loo isticmaalo hawl-wadeennada TV-ga, hawl-wadeennada isgaarsiinta, is-dhexgalka nidaamka, waxay si weyn u yareeyn karaan qiimaha beddelka nidaamka.
Ciyaaryahan ahaan, FBE300 waxay ku ciyaari kartaa faylalka fiidiyowga HD wax soo saarka HD ama xayeysiisyada bandhiga dhijitaalka ah.
FMUSER FBE216 H.264 H.265 16 kanaalka IPTV Encoder ee socodka tooska ah
Qiimaha (USD): 2480
FMUSER FBE216 waxay la socotaa is dhexgalka sare iyo nakhshad kharash-ku-ool ah ayaa ka dhigaysa aaladdan si ballaaran loogu isticmaalo nidaamyada qaybinta dhijitaalka ah ee kala duwan, sida dhismaha heerka baahinta xirfadeed ee IPTV & nidaamka OTT, soo dhaweynta IPTV codsiga, fog HD shir fiidiyoow daaqado badan ah, Waxbarasho HD fog fog. , iyo Remote HD daaweynta daawaynta, Streaming Live Broadcast, iwm.
16in1 FMUSER FBE216 H.264 /H.265 IPTV Streaming Encoder waxay taageertaa 16 maqal iyo 16 HD ururinta fiidiyooga iyadoo la gelinayo isku mar ikhtiyaarka. Waxaad dooran kartaa inaad isticmaasho stereo HD ama 3.5mm ee khadka maqalka.
FMUSER FBE200 H.264 H.265 Hardware IPTV Encoder ee Socodka Tooska ah
Qiimaha (USD): 196